To: दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च दोब्बर
काठमाडौं, वैशाख २९ - २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरक्षासहित ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भने अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अझै थप दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सरकारको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २९ - गृह मन्त्रालयले वैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचन हुने जिल्लाहरूसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा ४८ घन्टासम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन शान्त र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सीमा बन्द गर्न लागिएको हो। Comments
उपाध्यक्ष ढुंगेललाई बर्खास्त गर्न पत्र
काठमाडौं, वैशाख २९ - मन्त्रिपरिषदबाट स्पष्टिकरण लिने निर्णय भएको एक सातापछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीले राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुंगेललाई बर्खास्त गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ। यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचार पत्रबाट लिएका हौ।
काठमाडौं, वैशाख २९ - मतदान केन्द्रको सुरक्षा खलबलिए पाँचदेखि १० मिनेटभित्र त्यहाँ थप सुरक्षाकर्मी पुग्ने भएका छन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार मतदान केन्द्रमा आवश्यक परे तत्काल थप सुरक्षाकर्मी पुग्नेछन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
काठमाडौ, वैशाख २९ - सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गर्न वर्षेनि करोडौं रूपैयाँ निकासा गर्दै आएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले पछिल्लो चार वर्षमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दल सम्बद्ध कार्यकर्ताका लागि करिब ४५ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको हो। यो खबर मातृका दाहालले आजको कारोबारमा लेखेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख २८ - स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै नेपाली मतदानबाट बन्चित हुँदै छन्। जो जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले यो निर्वाचनमा समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
काठमाडौं, वैशाख २८ - तीन जिल्लामा देउवाको व्यस्तता
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार मध्याह्न ११ बजे चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल रहेको उक्त सभामा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ...
काठमाडौं, वैशाख २८ - २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ । लामो समयपछि स्थानीय निर्वाचन हुन लागेकाले होला, जताततै निर्वाचनकै चर्चा छ । निर्वाचनमाआफ्नो अमूल्य मत खसाल्न विदेशबाट समेत धमाधम मतदाता आउनथालेका छन् । यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
काठमाडौँ, वैशाख २८ - उनको कोटेश्वरस्थित होटल होम एन्ड गेस्ट हाउसमा हत्या गरिएको अवस्थामा वैशाख २४ गते शव फेला परेको छ । हत्याका अभियुक्त फोनप्रेमी बद्री पनि तीन दिनपछि पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार फोनप्रेमका कारण बद्री गत चैत २० गते स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूबीच प्रत्यक्ष भेट भएको थियो । पहिलो भेटमा उनीहरूबीच सामान्य भलाकुसारी भएको थियो । Comments
काठमाडौं, वैशाख २८ - छत्रकोट गाउँपालिका–२ पल्लीकोटमा गत शुक्रबार आमाछोरा एउटै डोरीमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे। साँझ पौने ६ बजे पल्लीकोटकी २० वर्षीया शीतल परियार र उनका दुई वर्षीय छोरा प्रवेश झुन्डिएर आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
चुनावी असर छैन बैंकमा
काठमाडौं, वैशाख २८ - २० वर्षमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झेल्नु परेको छैन। केन्द्रीय स्तरको चुनावमा चन्दा आतंकले सताउने बैंकर्सलाई स्थानीय तहको चुनावमा भने रकम दिनु परेको छैन । ‘कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ता चन्दा माग्न आएकै छैनन् र हामीसँग चन्दा दिने रकम पनि हुँदैन', नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेसरी शाहले भने, ‘राष्ट्रिय स्तरको चुनाव नभएकाले होला ।' यो खबर मेनुका कार्कीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेकी छन्।
आमा-छोरी नै म्यादी प्रहरी
काठमाडौं, वैशाख २८ - बाँकेको बैजापुरमा आमा-छोरी नै म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका छन् ।राप्ती सोनारी गाउँपालिका—४ का ३५ बर्षिया आमा धनसरा परियार र १९ वर्षीया छोरी रितु परियार म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका हुन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
कर्णालीमा चुनावभन्दा यार्चा प्यारो
कालिकोट, वैशाख २८ - स्थानीय तहको निर्वाचन र यार्चागुम्बा टिप्ने मौसम एकैसाथ आएका कारण कर्णालीका अधिकांश गाउँमा चुनावको कुनै रौनक छैन। स्थानीयलाई चुनावभन्दा यार्चा टिप्ने हतारो छ। यो खबर रमेश रावलले आजको कारोबारमा लेखेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख २८ - राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल बायु सेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एक थान ठूलो जहाज भाडामा लिन ग्लोबल टेन्डर आव्हान गरेको छ। यो खबर सुशील भट्टराईले आजको नागरिकमा लेखेका छन्। निगमले दुई महिनाका लागि एक थान जहाज भाडामा लिन टेन्डर आव्हान गरेको हो। यसअघि आव्हान गरेको टेन्डरमा कुनै पनि कम्पनीले सहभागिता नजनाएपछि निगमले दोस्रो पटक टेन्डर आव्हान गरेको हो।
काठमाडौं, वैशाख २८ - तपाईँको फेसबुक तथा ट्विटर वालमा पछिल्लो समय कति त्यस्ता पोस्ट आएका हुन सक्छन्, जसमा ‘स्पोन्सर' लेखिएको छ । ती ‘स्पोन्सर' लेखिएका सबै पोस्ट तपाईंलाई लक्षित गरिएका हुन् । यसरी ‘स्पोन्सर'का नाममा गत एक महिनाको अवधिमा हजारौं संख्यामा फेसबुक तथा ट्विटरमा पोस्ट छाएका छन्। यी पोस्ट विशेषगरी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर राखिएका हुन् । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ बाहिर पठाइसकेका छन् । दैनिक लाखौं रुपैयाँ यसरी बाहिरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । यो खबर रञ्जनहरि कोइरालाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख २७ - स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुन पाँच दिन बाँकी छ । निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत माग्न उम्मेदवारहरु तथा समर्थकहरु घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । पार्टीका उम्मेदवारहरु कार्यकर्ता र समर्थकसँगै तामझामका साथ कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यसरी गरिने तामझामका लागि उनीहरुको स्रोत के होला ? सबैलाई चासो हुन सक्छ । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
चिकित्सकभन्दा झाँक्री–वैद्य प्यारा, डाडुको रापले दाँतको उपचार
बाजुरा, वैशाख २७ - स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–२ की जनपुरा रावल दाँत दुखेपछि रातभर सुत्न सकिनन् । बिहानीको पर्खाइमा उनले कष्ट सहेर रात कटाइन् । उज्यालो भएपछि उनको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य चौकी परेन । उनी सिधै स्थानीय वैद्यकोमा गइन् । वैद्यले भान्सामा प्रयोग हुने फलामको डाडु आगोको भुंग्रोमा रातो हुने गरी तताइन् । त्यसपछि ती महिला वैद्यले उनको दुखेको दाँतमा केहीबेर डामिन् । रावललाई तातो डाडुको रापले बिसेक भयो ।
बागलुङ, वैशाख २७ - राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बाँस्कोटा बागलुङ नगरपालिका–३ की वडा अध्यक्ष उम्मेदवार हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक चुनाव चिह्न ‘गिलास’ हो। तर, उनी एमालेको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ लिएर उठेकी छिन्, त्यसैमा मत खसाल्न आग्रह गर्दैछिन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
यसरी हुँदै छ महानगरमा मेयरको प्रचार
काठमाडौं, वैशाख २७ - काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख दलका मेयरका उम्मेदवारले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रचारप्रसारका सबै शैली अपनाएका छन्। योसँगै उनीहरूको व्यस्तता पनि बढेको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
मदिरा बिक्री ह्वात्तै बढ्यो
काठमाडौं, वैशाख २७ - दिनभरी भोट माग्न ब्यस्त हुने उम्मेदवारसँगै अकिांश दलका कार्यकर्ता साँझ परेपछि सहरका ससाना भट्टी छिर्छन्। अलिक पैसा हुने र उपल्ला तहका कार्यकर्ता भने गतिला र राम्रा रेष्टुरेन्ट पस्छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
अपराधी पनि म्यादी प्रहरीमा
काठमाडौं, वैशाख २७ - अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेकाहरू पनि म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएको खुलेको छ। यस्तै एक व्यक्तिलाई प्रहरीले सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको छ। यो खबर मातृका दाहालले आजको कारोबारमा लेखेका छन्।
सबै स्थानीय तहमा एउटै ढाँचा, काम सक्ने दिन तोकेरै दिने
काठमाडौं, वैशाख २७ - सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका सात सय ४४ स्थानीय तहमा गर्ने कामहरूको ढाँचा एउटै बनाउने भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कुनकुन काम कति दिनमा गरिसक्नुपर्ने हो, किटान गरेर सेवा दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।विगतमा स्थानीय निकायमा एउटै काम पनि गाविस र नगरपालिकाबाट सम्पादन गर्दा ढाँचा, सेवाशैली, समय र प्रक्रिया फरक पर्दा सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाएकाले संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारबाट सहज र प्रभावकारी सेवासुविधा प्रदान गर्न एउटै ढाँचा र काम सक्ने अवधिसमेत तोकिएको हो। यो खबर गोपीकृष्ण ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
'संविधान संशोधन जेठ ४ मै'
काठमाडौं, वैशाख २७ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ ४ गते नै संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने आश्वासन मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई दिएका छन्। सरकारसँगको पूर्व सहमतिअनुसार संविधान संशोधन नभएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका मोर्चाका नेतालाई दाहालले 'जेठ ४ गतेसम्म पर्खिद...
काठमाडौं, वैशाख २७ - निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको मतदानलगत्तै मतगणना गर्ने जनाएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म मतगणना पर्खिने कि नपर्खिने भन्ने द्विविधाबीच आयोगले दोस्रो चरणसम्म नकुर्ने स्पष्ट गरेको हो।'वैशाख ३१ गते निर्वाचन सकिएर मतदानस्थलमा मतपेटिका पुगेपछि मतगणना सुरु हुन्छ', निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने। यो खबर नरेन्द्र साउदले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
चार पार्टीबाट १२औँ पटक सत्तारोहण
काठमाडौं, वैशाख २६ - नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन्। योसहित उनी १२औं पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा मधुसुधन भट्टराईले लेखेका छन्।
सरकारमा गच्छदार सहभागी भएपछि एमालेले भन्यो– सरकारको औचित्य समाप्त
काठमाडौं, वैशाख २६ - ‘विजय गच्छदारलाई सहभागी गराएर सरकार विस्तार गर्ने कुरा अन्तिम उपाय लगाएर बाँच्ने कोशिश मात्रै हो । आयातीत डाक्टरमार्फत उपचार गराए पनि नेचुरल्ली सरकार डेथ भइसकेको छ। ३१ वैशाखको निर्वाचनले उचित परिणाम नदिए ३१ जेठसम्म पुग्दा कसोकसो एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने।
१ जेठबाट मतगणना गर्ने आयोगको तयारी
काडमाडौं, वैशाख २६ - निर्वाचन आयोगले ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना १ जेठबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । मतदान सम्पन्न भएको दिन बेलुकासम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतपेटिका ल्याई १ जेठबाट गणना सुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ । दुर्गम क्षेत्रका मतपेटिका आउन समय लाग्ने भएकाले हेलिकोप्टरमार्फत छिटोभन्दा छिटो ल्याएर गणना गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो खबर योगेश ढकालले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख २६ - आगामी असोजसम्म काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने घोषणा गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको मेलम्ची खानेपानी आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन र आगामी असोजसम्म काठमाडौंमा पानी नआउने भएको छ। यो खबर आजको गोरखापत्रमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन्।
पैसावालालाई हातहातै ‘टिकट’
नेपालगन्ज, वैशाख २६ - रूकुम चौरजहारी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिन धेरै लागिपरेका थिए। तर, पार्टीले करिब एक महिनाअघि नेपाल बैंक लिमिटेडको जागिरबाट रिटायर्ड भएका बलबिर गोसाईँलाई टिकट दियो।
जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा मात्रै साढे ३ अर्ब, कसको कति तलब?
काठमाडौं, वैशाख २६ - स्थानीय तहमान निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा मात्र वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च देखिएको छ। यो खबर निरू अर्यालले आजको कारोबारमा लेखेकी छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई तलबबापत मासिक २० करोड २९ लाख ९ हजार रूपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ।